Apple Park dia efa voatanisa ho foibe ofisialin'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Apple Park dia efa voatanisa ho foibe ofisialin'i Apple
Ruben gallardo | | About us
Misy milaza fa io no asa lehibe farany nataon'i Steve Jobs. Ary antony tsy ananan'izy ireo izany: ny Apple Park dia iray amin'ireo tranobe mega-nahagaga indrindra hitanay tato anatin'ny taona vitsivitsy. Toy ny vokatra mpanjifa natombok'ireo avy ao Cupertino, ity Apple Park ity dia niteraka fifaliana lehibe teo amin'ny vahoaka. Ary nandritra ny volana maro dia afaka nankafy ny fivoaran'izy ireo tamin'ny fomba fijery drone izahay.
Na dia tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa aza, maro tamin'ireo mpiasa no nifindra tany amin'ny foibe vaovao, tao amin'ny mailaka sy ny adiresy ofisialin'i Apple dia mbola nahitana ny adiresy taloha, One Infinite Loop. Izany no tranga hatramin'ny herinandro lasa izay, izay Apple Park, farany, dia efa birao ofisialin'i Apple vaovao amin'ny antontan-taratasinao rehetra.
Mahazo vaovao isan-karazany avy amin'ny Apple Park izahay. Fantatsika fa mbola misy zoro vitsivitsy mbola ho vita, indrindra ireo faritra maintso. Inona koa, manana ny porofo amin'ny horonan-tsary izahay. Toy izany koa ny varavarankely lehibe amin'ny trano dia miteraka lozam-pifamoivoizana eo amin'ireo mpiasan'ny Apple rehefa sendra azy ireo matetika. Na, ny filankevitry ny tanànan'i Cupertino nahazo alalana hibodo 5 amin'ireo fizarana 12 ananan'ilay faritra vaovao.
Araka ny efa nolazainay taminao, andro vitsivitsy lasa izay, One Infinite Loop no foiben'ny ofisialin'i Apple. Na izany aza, nanomboka 9to5mac tonga saina izy ireo Tamin'ny alàlan'ny mailaka iray avy amin'ny orinasam-panompoana Apple Music izay teo am-pototry ny mailaka dia niova ny adiresy. Azo antoka fa Apple Park izao.
Ankoatr'izay, raha mitsidika ny pejy Apple ianao izao, ao amin'ny fizarana "Mifandray" dia ho azonao atao ny manamarina fa tena nanatanteraka ilay fanovana ary ny adiresy orinasa izao "One Apple Park Way". Heverinay fa efa saika vita ny asa ary ho avy io rehefa mahazo alalana feno izy ireo amin'ny farany hibodo ny faritra rehetra ao amin'ny foibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Park dia efa voatanisa ho foibe ofisialin'i Apple
Atsaharo na ovao ny bitsika "Miaina" ao amin'ny Apple Watch anao
Diovy haingana amin'ny lahatahiry Nuclear Folder ny lahatahiry anao amin'ny fisie tsy ilaina